Posterior pituitary इंजेक्शन - चीन Ningbo दोस्रो हर्मोन
Posterior pituitary इंजेक्शन
Posterior pituitary इंजेक्शन posterior pituitary सुँगुर pituitary ग्रंथि देखि निकासी गरेर तयार सबै-प्राकृतिक उत्पादन हो। [विवरण] यो उत्पादन एक बेरंग पारदर्शी वा लगभग पारदर्शी तरल छ। [प्रकार्य र प्रयोग] यो उत्पादन ओक्सीटसिन र pitressin समावेश गर्दछ। ओक्सीटसिन uteruses छानेर उतेजित गर्नु र uterine चिल्लो मांसपेशीमा को संकोचन बलियो बनाउन सक्छ। रोमाञ्चक uterine चिल्लो मांसपेशीमा यसको प्रभाव Vivo मा खुराक र हर्मोन स्तर अनुसार फरक हुन्छ। एक सानो खुराक ओ ...
Posterior pituitary छ एक सुँगुर देखि निकासी गरेर तयार सबै-प्राकृतिक उत्पादन pituitary ग्रंथि।
यो उत्पादन एक बेरंग पारदर्शी वा लगभग पारदर्शी तरल छ।
यो उत्पादन ओक्सीटसिन र pitressin समावेश गर्दछ। ओक्सीटसिन uteruses छानेर उतेजित गर्नु र uterine चिल्लो मांसपेशीमा को संकोचन बलियो बनाउन सक्छ। रोमाञ्चक uterine चिल्लो मांसपेशीमा यसको प्रभाव Vivo मा खुराक र हर्मोन स्तर अनुसार फरक हुन्छ। यो उत्पादन एक सानो खुराक वर्दी संकोचन र विश्राम देर गर्भावस्था को समयमा साथ uterine मांसपेशीमा को ताल contractions बृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ; उत्पादन को ठूलो खुराक uterine चिल्लो मांसपेशीमा को tetanic संकोचन कारण र hemostatic प्रभाव पार्छन् गर्न myometrium मा रक्त नली प्रेस हुनेछ। साथै, ओक्सीटसिन दूध को इन्जेक्शन सुविधा, को mammary acini र mammary ducts वरिपरि myoepithelial कक्षहरूको संकोचन प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ। Pitressin antidiuresis र रक्तचाप प्राथमिकता दिंदा को प्रभाव छ। यो मुख्य रूप मा लागू गरिन्छ:
1 Postpartum दूध इन्जेक्शन, mammary सुनिंनु, र नव बुझाइएको महिला जनावर दूध कमी लागि lactation प्रचार को विकार; दूध इंजेक्शन पछि 1-4 घण्टा निकालेको गर्न सकिन्छ।
2. parturition र odinopoeia Hastening।
गाई 'विशाल रक्तस्राव को लागि3Hemostasis।
4 Postpartum uterine रक्तस्राव र भ्रूण झिल्ली खुलिरहेको।
1 Postpartum दूध इन्जेक्शन, mammary सुनिंनु, र नव बुझाइएको महिला जनावर लागि lactation प्रचार को विकार दूध कमी: intramuscular इंजेक्शन लागि एकल खुराक: परिपक्व घोडाहरू र गाई लागि 20-40 एकाइहरु,3लगातार दिनको लागि एक दिन एक पटक; परिपक्व भेडा र सुँगुर लागि 10-20 एकाइहरु,3लगातार दिनको लागि एक दिन एक पटक; कुकुर, बिरालोहरु, Foxes, racoon-कुकुर र minks,3लगातार दिनको लागि एक पटक एक दिन को लागि 5-10 एकाइहरू।
2. Hastening parturition र odinopoeia: उपचर्म इंजेक्शन वा intramuscular इंजेक्शन लागि एकल खुराक: घोडाहरू र गाई लागि 30-100 एकाइहरु; भेडा र सुँगुर लागि 10-50 एकाइहरु; कुकुर लागि 2-10 एकाइहरु; बिरालोहरु लागि 2-5 एकाइहरू।
गाई 'विशाल रक्तस्राव को लागि3Hemostasis: नसों इंजेक्शन; एकल खुराक को लागि 100-150 एकाइहरु (ग्लूकोज वा सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन को 500ml थपियो)।
उपचर्म इंजेक्शन वा intramuscular इंजेक्शन लागि एकल खुराक:4Postpartum uterine रक्तस्राव र भ्रूण झिल्ली खुलिरहेको घोडाहरू र गाई लागि 30-100 एकाइहरु; भेडा र सुँगुर लागि 10-50 एकाइहरु; कुकुर लागि 2-10 एकाइहरु; बिरालोहरु लागि 2-5 एकाइहरू।
1 जन्म नहर असामान्यता, असामान्य भ्रूण स्थिति, र अझै-को खुला cervixes मा श्रम समय नजिकै Contraindicated।
2. उच्च खुराक रक्तचाप, oliguria र पेट दुखाइ को उचाइमा हुन सक्छ।
10 एक्स 1ml: 10 units
छायाँपारिएको र गाढा र सुन्दर ठाउँमा भण्डारण (20 ℃ को तापमान अन्तर्गत)।
अघिल्लो: इंजेक्शन लागि pituitary Luteinizing हर्मोन (बाहिरु)
अर्को: इंजेक्शन लागि गर्भवती Mare सीरम Gonadotropin (PMSG)
लागि इंजेक्शन Bovines र सुँगुर LHRH-A3